AH: လာရောက်လည်ပတ်သူ အများဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ် ၅၀ (မေလ ၂၀၁၂)
လာရောက်လည်ပတ်သူ အများဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ် ၅၀ (မေလ ၂၀၁၂)
စင်္ကာပူ ပြန်ရောက်တုန်း အချိန်လေးရတာနဲ့ ဖူးနုသစ်မှာ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလအတွက် လာရောက်လည်ပတ်သူ အများဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ် ၅၀ ကို update လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးလေးရတာနဲ့ တစ်နေကုန်ထိုင်လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ၀မ်းသာစရာကတော့ မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါအသစ်တွေ များလာတဲ့အတွက် ဘလော့ဂ်အရေအတွက်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ List တွေကိုတော့ အဓိကအားဖြင့် ဘလော့ဂ်ဂါများရဲ့ ပိုစ့်များ ထဲကနေယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကနေ Alexa ရဲ့ Ranking အတိုင်း လာရောက်လည်ပတ်သူအများဆုံး ဘလော့ဂ် ၅၀ကို ၂၀၁၂ မေလအတွက် Update လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Alexa အကြောင်းကတော့ ဖူးနုသစ်ထဲမှာ အရင်တစ်ခေါက်က ရှင်းထားတဲ့အတွက် ဒီမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မလေးဆီက အဝေးရောက် ခရီးသည်
Dr. Ko Ko Gyi's Blog
ITN Information Technology & Network
My Freedom (CANDY)
ပူးပူး (စိတ်အပန်းဖြေရာ နေရာလေးတစ်ခု)
ကိုဇော် (ဖတ်မိ၊ မြင်မိ၊ တွေးမိ သမျှ)
Posted by AH at 5/16/2012 11:41:00 PM
ZT May 17, 2012 at 12:34 AM
ကောင်းပါတယ်။ အားပေးတယ်။ ကျွန်တော်တော့ တစ်ခါလုပ်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ :D
mstint May 17, 2012 at 8:28 AM
အိုင်ဒီယာလေး ကောင်းတယ် မောင်အောင်ထွဋ်ရေ။ မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် ထားသင့်တယ်။
နေ၀သန် May 17, 2012 at 9:00 AM
အဲလိုလည်းရလား.. :D.. အခုမှသိတယ်...
မြသွေးနီ May 17, 2012 at 10:59 AM
ချစ်ခင်ရသူ ဘလော့၊ဂါများပါ ပါဝင်နေလို့ ၀မ်းသာမိရပါတယ်ရှင်..။
Candy May 17, 2012 at 1:34 PM
ကိုAH ကြီးလည်း ပါတယ် ဟိ
မိုးသက် May 17, 2012 at 2:22 PM
တို့မမ ကြီးပါတယ်.. ဟီးဟီး.။
Anonymous May 17, 2012 at 4:32 PM
A lot of famous websites have left to check. Such as moemakha, mizzima, aphyuyaungthanzin, sagarwarmyae blah blah blah. :)
Unknown October 21, 2012 at 8:39 PM
ကြော်ငြာထဲမှ ဟာသများ ၂
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှ Status များ ၂
ကြောင် အကောင် ၅၅၀ မွေးလို့ မိန်းမကို ကွာရှင်းလိုက်...
သတိ ယင်နှစ်ကောင်ထက် မပိုရ..
သူတို့တွေ ဘယ်ကစတယ် ၁
လုပ်ကြဦးမလား ပလက်စတစ် ဆာဂျရီ
စိုက်မယ် ပျိုးမယ် ရွှေပြည်ကြီး တိုးတက်အောင်လို့ကွယ်
ရည်းစားလက်ကလွတ်အောင်ပြေးရင်း အမှိုက်ပုံးထဲ ပိတ်မိနေ...
ချစ်သက်လျှာအတွက် အသက်ပေးကာ ချစ်မလေ
သံလိုက်ကို လက်ထဲဖောက်စိုက်လို့ iPod နာရီဖြစ်အောင်ထ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ချောကလက် အဆောက်အဦး
နိုင်ငံရေးလောကထဲက မချောများ ၂
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ စင်္ကာပူ ဖုန်းရွှေပုံပြင်များ ၂
အင်ဂျင်နီယာတို့ အစွမ်း အံမခန်း
နိုင်ငံရေးလောကထဲက မချောများ ၁
အော်ကီဂါဟာရ (သို့) ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Suicide Forest
ချစ်သည်းနဲ့ ဖုန်းဆက်ရင် အနားမှာ ရှိသလို ခံစားရစေမယ...
အားနွဲ့သူလို့မထင်လေနဲ့ ကားနှစ်စီးကို ဆံပင်နဲ့ဆွဲနု...
ပိုက်ဆံ မသုံးပဲ ၁၂နှစ်ကြာနေထိုင်သူ
ငိုရင်ငို မငိုရင် သင်တန်းတက်ရမယ်… ဘာမှတ်နေလဲ?